YINTONI INKONZO YOKUNIKEZELWA KWEVISA - IBHLOG
Yintoni inkonzo yokuNikezelwa kweVisa
Siza kukubonisa konke okufuneka ukuqonde malunga nenkonzo yokubonelela ngeVisa kubandakanya ukubaluleka kwayo, ukuhlawulwa kwekhadi letyala, umrhumo ozayo, inombolo yoqhakamshelwano, iindawo zebill ezisalindelweyo, kunye nezinye iimeko onokuzikhangela.
Kukwanjalo nakwinkonzo yokubonelela ngevisa visa iingxelo zebhanki kunye neenkonzo ezinxulunyaniswe nayo kubandakanya INetflix Hlawula kuGoogle, PayPal , kunye neAmazon.
Amakhadi abo etyala aququzelela ukuthengwa kwamashumi amawaka eempahla kunye neenkonzo kwi-Intanethi, kwaye kunjalo nakumaqonga angaxhunyiwe kwi-intanethi. Kwaye kwilinge lokuphucula inkxaso yayo kubathengi bayo kwihlabathi liphela, inkampani yamkela ubuchwepheshe bale mihla kwiinkqubo zayo.
Ukwamkelwa kwetekhnoloji kukhokelele ekufikeni kwenkonzo yokubonelela ngeVisa.
I-netgear ac750 wifi ye-wifi ye-extender ukuseta ngaphandle kwe-wps
Ukubonelela ngeeVisa ngeNkonzo
Inkonzo yokubonelela ngeVisa kuthetha ukubonelela ngenkonzo. Ke, inkonzo ebonelelweyo apha kukubonelela kwakho ngamakhadi eVisa.
Ukuqonda le nkxaso, kunokuba kufanelekile ukuba uqaphele ukuba kukho iinkqubo zeebhanki kunye nokwenza ubuNtu kwi-Bearaus kufuneka ibambelele ekwenzeni ikhadi elikhuselekileyo eline-chip.
Nangona kunjalo, ukuqhubela phambili kubangele ukuba amandla amaqonga enze iprosesa ekhuselekileyo kusetyenziswa i-smartphone. Kwakukho emva koko ukusetyenziswa kweKhadi lokuSingathwa kweKhadi okuvumela ukuguqulelwa okugqithisileyo ukuba kwenzeke.
Umxube wezo nkqubo wonyusa inani lokhuseleko lweakhawunti yomntu. Kungenxa yokuba iakhawunti ayinikezelwanga kwi-smartphone yomsebenzisi.
Apho ukuthenga elongate
Nangona kunjalo, le akhawunti ibhekiswa kuyo nangona isenokuba kwikhadi eliqhelekileyo.
Ngenxa yoko, inkonzo yokubonelela ngeVisa ibonelela abaqhubi benethiwekhi yeselfowuni ngendlela elula yokufumana ulwazi lwezezimali kwii-smartphones zabo.
Ezi zixhobo ezisebenzisa ithuba lokunxibelelana kwimihlaba ekufutshane (NFC).
# ukubonelela ngeenkonzo zokundwendwela # ukubonelelwa nge-visa #payments #paypal #amazon # digital-payments # online-shopping # payment-gateway
Siza kukubonisa konke okufuneka ukuqonde malunga nenkonzo yokubonelela ngeVisa kubandakanya ukubaluleka kwayo, ukutshaja kwikhadi letyala, umrhumo ozayo, inombolo yoqhakamshelwano, iindawo zebill ezisalindelweyo, kunye nezinye iimeko onokuzikhangela.
I-Android: ibha yokulinganisa
Eyona python yoyilo yoyilo
Useto lwe-imeyileol smtp
uyithenga phi i-polygon crypto